Manchester United 4-0 Everton – Xasuuqii Rooney Kala Kulmay Old Trafford
HomeEnglandManchester United 4-0 Everton – Xasuuqii Rooney Kala Kulmay Old Trafford
Romelu Lukaku ayaa ka dhaliyey kooxdiisii hore, ciyaar Manchester United xasuuq ba’an u geysatay kooxda Everton korna ugu ruqaansatay hogaaminta horyaalka wali bilowga ah ee Premier League.
Ciyaartii ugu horeysay ee Wayne Rooney soo booqdo garoonkiisii hore ee Old Trafford ayaa ku dhamaaday fajac iyo amakaag – waxaana wacdaraha ugu dareen dhaceen, daqiiqadihii u dambeeyey ciyaarta oo ay saddex gool dhasheen – kuwaas oo u diray kooxda Everton inay kamid noqoto saddexda naadi ee ugu hooseeya shaxda kala saraynta horyaalka.
Naadiga lagu naanayso The Toffees ayaa la ildaran bilowga xun ee xili ciyaareedkani ku qaabilay, kaas oo aanay ilaa hadda hal gool ka dhalinin afartii kulan ee tartamada oo dhan ay ciyaareena dhamaantood laga badiyey.
Antonio Valencia ayaa ku qabtay kubad uu ka helay Jordan Pickford masaafo 25 yards ah si uu naadiga tabobare Jose Mourinho ugu gacan galiyo hogaaminta ciyaarta bilowgii kulankaba.
Rooney, wiilka haysta rikoodhka gool dhalinta kooxda United ayaa helay labadii fursadood ee ugu fiicnaa ee soo maray kooxda Everton, kuwaas oo uu mid kamid ah uu helay sagaal daqiiqo uun markii ay ciyaartu socotay, laakiin uu goolwadaha dhaafin kari waayay.
Lukaku ayaa goolka afkiisa u dhigay Henrikh Mkhitaryan si uu dhib yaraan ugu xareeyo shabaqa, ka hor intii aanu weeraryahanka reer Belgium, laftiisu gool saddexaad ugu darin daqiiqado uun kadib, waxaanu ahaa laacibka ciyaarta bedelka ku soo galay ee Anthony Martial kii dhaliyey goolka gunaanadka daqiiqadihii lagu daray ciyaarta oo socda, kaas oo ahaa rigoodhe.
United iyo Manchester City ayaa haysta rikoodh isku mid ah kuna wada hogaaminaya horyaalka Premier League.
Liverpool Oo Manquillo Deyn Kaga Soo Qaadatay Atletico Madrid
Germany vs France 2-2 – Highlights & Goals – 14 November 2017
14/11/2017 Abdiwahab Ahmed
Asamoah Gyan Oo U Leexday Dhinaca Ganacsiga Iyo Diyaarado Uu Samaystay
26/10/2017 Abdiwahab Ahmed